Asetenam Nsɛm: Me Papa Fii Mu​—Minyaa Papa Foforo | Adesua
Wotuu Wɔn Ho Mae Koraa​—Wɔ Micronesia
‘Yehowa Nim Wɔn a Wɔyɛ Ne Dea’
ASETENAM NSƐM Me Papa Fii Mu​—Minyaa Papa Foforo
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bicol Bislama Brazilian Sign Language Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Cinyanja Colombian Sign Language Croatian Czech Danish Drehu Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Italian Sign Language Japanese Japanese Sign Language Kannada Kazakh Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Marathi Maya Mexican Sign Language Ndebele Ndonga Nepali Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Peruvian Sign Language Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tshiluba Tshwa Tsonga Tswana Turkish Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Uzbek Venda Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wolaita Xhosa Yoruba Zulu
Ɔwɛn-Aban—Nea Adesua Nsɛm Wom | July 2014
Me Papa Fii Mu—Minyaa Papa Foforo
Gerrit Lösch anom asɛm
WƆWOO me papa wɔ Graz, Austria, afe 1899, enti bere a Wiase Ko I fii ase no na ɔyɛ aberantewa. Bere a Wiase Ko II pae gui afe 1939 no, wɔde no kaa German asraafo ho kɔɔ ɔko no bi. Wokum no wɔ ɔko bi mu wɔ Russia 1943. Saa na ɛyɛe a me papa fii mu. Saa bere no na madi mfe mmienu pɛ, enti manhu me papa. Ade a na ɛyɛ me yaw paa ne sɛ mehu sɛ me mfɛfo sukuufo wɔ papa na minni bi. Meyɛ aberantewaa no misuaa yɛn soro Agya no ho ade, na mihui sɛ ɔyɛ Agya a ɔwɔ hɔ daa. Eyi kyekyee me werɛ.—Hab. 1:12.
MEDE ME HO KƆBƆƆ SCOUTFO
Bere a ɔyɛ abarimaa
Midii mfe nson no, mede me ho kɔbɔɔ Scoutfo (Boy Scouts). Ɔsraani panyin bi a ɔde Robert Stephenson Smyth Baden-Powell na ɔtew saa kuw yi afe 1908 wɔ Great Britain. Ekuw yi wɔ nkorabata wɔ wiase afanan nyinaa. Afe 1916 mu no, ɔtew kuw foforo maa mmarimaa nkumaa. Ekuw no din de Wolf Cubs (anaa Cub Scouts).
Ná yɛtaa tu kwan Memeneda ne Kwasida kɔbɔ sese wɔ wuram. Nea na ɛyɛ me anika paa ne sɛ yɛakodu hɔ na yɛasi ntamadan a yɛbɛda mu, na yɛahyɛ yɛn kuw no ntade. Bere a kyene gyina mu no, na yɛrebɔ nsra. Ade baako a na m’ani gye ho paa ne sɛ me ne me mfɛfo Scoutfo asɔ gya anwummere na yɛreto dwom twa ho hyia na yɛredi agorɔ wɔ wuram hɔ. Yehuu wuram nneɛma bebree, na ɛmaa mihui sɛ Ɔbɔadeɛ no nsaano adwuma yɛ fɛ.
Wɔka kyerɛ Scoutfo sɛ wɔnhwɛ sɛ wɔbɛyɛ adepa bi da biara da. Yehyia yɛn yɔnko Scoutni a, na yɛn nkyia ne sɛ “Yɛayɛ Krado.” Na mepɛ saa nkyia no paa. Mmerantewa bɛboro ɔha na na yɛwɔ kuw no mu. Na emu fã yɛ Katolekfo, ɛnna ɛfa yɛ Protestantfo; baako pɛ na na ɔyɛ Buddhani.
Efi 1920 reba no, ɛwɔ hɔ wɔ hɔ ara Scoutfo a wofi aman ahorow so hyiam di dwuma ahorow. Mekɔɔ nhyiam ahorow yi bi. Emu baako ne nea yɛyɛe wɔ Bad Ischl, Austria, wɔ August 1951. Foforo nso a mekɔe ne nea yɛyɛe wɔ Sutton Park, Birmingham, England, wɔ August 1957. Scoutfo bɛyɛ 33,000 fi aman 85 so baa Birmingham nhyiam no bi, na bɛhwɛadefo bɛyɛ 750,000 nso baa hɔ. England hemaa Elizabeth mpo baa hɔ bi. Na Scoutfo a wɔwɔ wiase nyinaa abɛyɛ sɛ me nuanom. Nanso na minnim sɛ sɛɛ merebenya anuanom a wɔsen saa koraa, nnipa a wɔdɔ Onyankopɔn.
MIHYIAA YEHOWA DANSEFO BI
Rudi Tschiggerl ne obi a odii kan dii m’adanse; na me ne no yɛ adwuma wɔ hotɛl
Ná misua adwuma wɔ hotɛl bi adidibea. Wɔfrɛ hotɛl no Grand Hotel Wiesler; ɛwɔ Graz, Austria. Bere a merebewie adesua no 1958 no, me yɔnko dwumayɛni bi a ɔde Rudolf Tschiggerl dii m’adanse. Na mentee nokware no ho hwee da. Odii kan ne me susuw Baasakoro nkyerɛkyerɛ no ho, na ɔkae sɛ enni Bible mu. Me nso meka kyerɛɛ no sɛ ɛwɔ Bible mu, enti nea ɔreka no nyɛ nokware. Na mepɛ me yɔnko no asɛm enti meyɛe sɛ mɛboa no ma wasan akɔ Katolek Asɔre.
Na yɛtaa frɛ Rudolf sɛ Rudi. Ɔyɛe sɛ ɔbɛma me Bible. Meka kyerɛɛ no sɛ Katolek Bible na mepɛ. Enti ɔmaa me bi na mifii ase kanee. Merekan no, mihui sɛ Rudi de kratawa bi a Watchtower Society no atintim ahyɛ mu. M’ani annye ho efisɛ na ɛyɛ me sɛ wobekyinkyim nsɛm ma ayɛ sɛ nokwasɛm. Nanso na mayɛ krado sɛ me ne no besusuw Bible ho. Rudi hui sɛ m’ani nnye wɔn nhoma ho, enti wamma me nhoma biara bio. Nanso ɛwom ara a na yɛabɔ Bible mu nkɔmmɔ kakra, na ɛtɔ da mpo a yetumi bɔ nkɔmmɔ kosi anadwo. Yɛyɛɛ saa bɛyɛ abosome mmiɛnsa.
Bere a miwiee m’adesua wɔ hotɛl hɔ wɔ me kurom Graz no, me maame san de me kɔɔ sukuu foforo kosuaa hotɛl ho nneɛma foforo. Na sukuu no wɔ Bad Hofgastein. Ɛyɛ kurow bi a ɛda Alps mmepɔw bi ntam. Na sukuu no ne Grand Hotel a ɛwɔ Bad Hofgastein no di nsawɔso, enti ɛtɔ da a na mekɔyɛ adwuma wɔ hɔ na mahu adwuma no ani so yiye.
MMEA ASƐMPATRƐWFO BAANU BƐSRAA ME
Ilse Unterdörfer ne Elfriede Löhr ne me fii ase suaa Bible 1958
Rudi de m’address kɔɔ Vienna Betel, na wɔka kyerɛɛ anuanom mmea asɛmpatrɛwfo baanu sɛ wɔmmɛhwehwɛ me. Baako din de Ilse Unterdörfer ɛnna baako nso de Elfriede Löhr. * Da bi nea ɔwɔ hotɛl no ahɔhogyebea frɛɛ me sɛ mmea baanu bi te kar mu rehwehwɛ me. Na ɛyɛ me nwonwa efisɛ na menhwɛ kwan sɛ obi bɛba abɛhwehwɛ me. Nanso mekɔɔ abɔnten kohuu wɔn. Akyiri yi metee sɛ bere a Nasi nniso baraa Yehowa Adansefo adwuma wɔ Germany no, mmea yi faa sum ase de nhoma kɔmaa anuanom wɔ mmeae ahorow. Ansa na Wiase Ko II refi ase no, Germany sum ase polisifo (Gestapo) kyeree mmea yi de wɔn kɔɔ Lichtenburg afiase. Nanso bere a ɔko no gyina mu no, woyii wɔn kɔɔ Ravensbrück afiase wɔ Berlin mpɔtam hɔ baabi.
Ná anuanom mmea yi ne me maame bɔ tipɛn, enti na mibu wɔn. Na mempɛ sɛ me ne wɔn bɛbɔ nkɔmmɔ biara na akyiri yi maka akyerɛ wɔn sɛ m’ani nnye ho. Katolekfo kyerɛkyerɛ sɛ ɔsomafo Petro ne pope a odi kan na popefo a aka nyinaa nyaa wɔn tumi fii ne hɔ. Enti meka kyerɛɛ wɔn sɛ nea mihia ara ne sɛ wɔbɛbrɛ me kyerɛwsɛm ahorow bi a ɛfa Katolek nkyerɛkyerɛ yi ho. Mekae sɛ mede bɛkɔ yɛn sɔfo hɔ ne no akosusuw ho. Na ɛyɛ me sɛ eyi bɛma mahu nokwasɛm a ɛwom.
MISUAA AGYA KRONKRON A ƆWƆ SORO NO HO NOKWASƐM
Katolek Asɔre no ka sɛ Yesu asɛm a ɛwɔ Mateo 16:18, 19 no kyerɛ sɛ Petro ne pope a odi kan na popefo no nyinaa nyaa wɔn tumi fii Petro hɔ. Bio, Asɔre no kyerɛkyerɛ sɛ pope yɛ Agya Kronkron na onni mfomso wɔ ne nkyerɛkyerɛ mu. Katolekfo pii gye saa asɛm yi di sɛ ɛno ne Asɔre no nkyerɛkyerɛ nyinaa fapem. Saa bere no na me nso migye di, enti na ɛyɛ me sɛ, sɛ pope ka sɛ Baasakoro no yɛ nokware a, ɛnde ɔkwan biara so ɛyɛ nokware. Sɛ nso sɛ pope tumi di mfomso a, ɛnde ebia Baasakoro nkyerɛkyerɛ no nso yɛ atoro.
Bere a mekɔɔ ɔsɔfo no hɔ no, wantumi anyi me nsɛmmisa ano. Mmom ɔmaa me nhoma bi a ɛka Petro ne popefo ho asɛm. Mede kɔɔ fie kɔkenkanee na mesan kɔɔ ɔsɔfo no hɔ kobisaa no nsɛm pii. Wantumi ammua me nsɛmmisa no, na ewiee ase no, ɔka kyerɛɛ me sɛ: “Merentumi nsesa w’adwene na wo nso worentumi nsesa m’adwene. . . . Ensi wo yiye!” Afei na ɔmpɛ sɛ ɔne me susuw biribiara ho bio.
Eyi akyi no na mayɛ krado sɛ me ne Ilse ne Elfriede besua Bible. Wɔkyerɛkyerɛɛ me Yehowa Nyankopɔn, Agya Kronkron nokwafo a ɔwɔ soro no ho ade pii. (Yoh. 17:11) Saa bere no na asafo biara nni mpɔtam hɔ, enti na anuanom mmea baanu no yɛ asafo nhyiam wɔ abusua bi a wɔresua Bible fie. Nnipa kakra bi na na wɔba. Na onuabarima a wɔabɔ asu biara nni hɔ a obedi anim, enti na mmea baanu yi ara na wɔbobɔ nsɛm a wobesusuw ho no so. Ɛtɔ da a na wɔakohyiam baabi ma onua bi fi kurow foforo so abɛma baguam ɔkasa wɔ hɔ.
MIFII ASƐNKA ASE
Ilse ne Elfriede ne me fii ase suaa Bible October 1958, na abosome mmiɛnsa akyi no mebɔɔ asu January 1959. Ansa na merebɔ asu no, mekae sɛ mepɛ sɛ me ne wɔn kɔyɛ afie afie asɛnka adwuma no na mehwɛ sɛnea wɔyɛ no. (Aso. 20:20) Bere a me ne wɔn kɔɔ baako no, meka kyerɛɛ wɔn sɛ wɔmma me asasesin. Wɔde akuraa bi hyɛɛ me nsa, na na me nko ara na mekɔyɛ afie afie asɛnka adwuma ne sankɔhwɛ wɔ hɔ. Akyiri yi ɔmansin sohwɛfo bɛsraa yɛn, na ɔno ne onuabarima a odi kan a me ne no kɔɔ asɛnka.
Bere a miwiee hotɛl sukuu 1960 no, mesan kɔɔ me kurom sɛ merekɔboa m’abusuafo ma wɔasua nokware no. Nanso besi saa bere yi nyinaa wɔn mu baako mpo mmaa nokware no mu. Mmom ebinom ani gye asɛm no ho kakra.
BERE NYINAA SOM ADWUMA
Bere a midii bɛyɛ mfe 20
Afe 1961 no, Betel kyerɛw nkrataa kɔmaa asafo ahorow de hyɛɛ anuanom nkuran sɛ wɔmfa wɔn ho nhyɛ akwampae adwuma no mu. Na meyɛ sigyani a mete apɔw, enti na merentumi mfa biribiara nyi me ho ano. Na misusuw sɛ mihia kar ansa na matumi ayɛ akwampae adwuma no. Na m’adwene ne sɛ mɛyɛ adwuma abosome kakra na manya sika atɔ kar. Saa bere no na Kurt Kuhn ne yɛn mansin sohwɛfo, enti mibisaa n’adwene. Obisaa me sɛ: “Wususuw sɛ Yesu ne asomafo no de kar na ɛyɛɛ bere nyinaa som adwuma no?” Asɛm no pem me paa. Enti misii gyinae sɛ mefi akwampae adwuma no ase ntɛm ara. Nanso na meyɛ adwuma wɔ hotɛl bi adidibea, na nnawɔtwe biara na mede nnɔnhwerew 72 yɛ adwuma. Enti na ehia sɛ meyɛ nsakrae na matumi ayɛ akwampae adwuma no.
Mesrɛɛ m’adwumawura sɛ mepɛ sɛ ɔtew nnɔnhwerew 72 a mede yɛ adwuma no so ba nnɔnhwerew 60 nnawɔtwe biara. Ɔtew bere no so nanso wantew m’akatua so. Mmere kakra guu mu no, mesan srɛɛ no sɛ ɔmma menyɛ adwuma nnɔnhwerew 48 pɛ. Eyi nso ɔpenee so, nanso na m’akatua gyina nea egyina. Akyiri yi mesan srɛɛ no sɛ ɔntew bere no so na menyɛ adwuma nnɔnhwerew 36 nnawɔtwe biara. Ɛno nso wampopo ne ti. Anwonwasɛm ne sɛ wantew kaprɛ mpo amfi m’akatua so! Nea mihui ara ne sɛ na m’adwumawura mpɛ sɛ migyae adwuma no. Nsakrae a meyɛe yi boaa me ma mitumi fii akwampae adwuma no ase. Saa bere no na ɛsɛ sɛ ɔkwampaefo biara de nnɔnhwerew 100 ka asɛm no bosome biara.
Abosome nnan akyi no, wɔpaw me ɔkwampaefo titiriw wɔ asafo ketewa bi mu wɔ Spittal an der Drau, na na mesan som sɛ asafo somfo. Saa bere no na ɔkwampaefo titiriw biara de nnɔnhwerew 150 na ɛka asɛm no bosome biara. Ná ɔkwampaefo foforo biara nni hɔ a me ne no yɛ asɛnka adwuma no, nanso na onuawa bi a ɔde Gertrude Lobner boa me paa wɔ asɛnka mu. Onuawa yi na na ɔyɛ asafo somfo boafo. *
MINYAA DWUMADI AHOROW AHOROW
Afe 1963 no, Betel paw me sɛ ɔmansin sohwɛfo. Sɛ mifi asafo baako mu rekɔ foforo mu a, na metaa faa keteke. Wobɛhwɛ na me nneɛma nso bobɔ me ho. Ná anuanom pii nni kar a wɔde bɛba abɛfa me wɔ keteke gyinabea hɔ. Nà mempɛ sɛ mɛfa taksi akɔ baabi a mɛsoɛ na anuanom annya adwene sɛ meyɛ “akɛsesɛm,” enti na menantew.
Wɔtoo nsa frɛɛ me sɛ menkɔ Gilead sukuu 1965, na na meka adesuakuw a ɛto so 41 no ho. Na sukuufo no pii yɛ asigyafo te sɛ me ara. Yewiee sukuu no wɔkae sɛ mensan nkɔ me kurom Austria nkɔtoa so nyɛ ɔmansin sohwɛfo. Na menhwɛ kwan saa koraa! Ansa na merefi United States no, me ne ɔmansin sohwɛfo bi yɛɛ adwuma bosome baako. Yɛfrɛ no Anthony Conte, na na ɔpɛ nnipa paa. Asɛnka adwuma nso, ɔmfa nni agorɔ koraa. Ɛyɛɛ me dɛ paa sɛ me ne no somee. Me ne no somee wɔ Cornwall mpɔtam wɔ New York atifi fam.
Ɛda a yehyiaa ayeforo
Bere a mesan kɔɔ Austria no, mekɔsom ɔmansin bi, na ɛhɔ na mihyiaa onuawa sigyani hoɔfɛfo bi a ɔde Tove Merete. Bere a odii mfe nnum na n’awofo fii ase de nokware no tetee no. Sɛ anuanom bisa nea ɛyɛe a yehyiae a, yɛtaa ka di agorɔ sɛ, “Betel adaworoma oo.” Yɛwaree April 1967, na ɔkaa me ho ma yɛkɔsrasraa asafo ahorow.
Afe a edi hɔ no Yehowa adom, mebɛkaa ne honhom mu mma ho. Eyi maa me ne me soro Agya ne ne honhom mu mma nyinaa benyaa abusuabɔ soronko. Romafo 8:15 ka sɛ ne honhom mu mma nyinaa teɛm sɛ, “Abba, Agya!”
Me ne me yere Merete kɔɔ so yɛɛ ɔmansin ne ɔmantam adwuma kosii 1976. Bere a yɛresrasra asafo ahorow no, ɛtɔ da na awɔw ba a, yɛn dan mu tumi yɛ wiriduduudu ma wuhu sɛ awɔw ni. Da bi anɔpa mpo de, yɛda sɔree no na yɛn hwenem ntutuw ama yɛn kuntu ano akyenkyen sɛ asukɔtweaa. Afei yehui sɛ ɛsɛ sɛ yenya heater ketewa bi hyɛ yɛn ho na ama yɛn dan mu ayɛ hyew kakra anadwo. Baabi wɔ hɔ a, sɛ edu anadwo na yɛpɛ sɛ yɛyɛ yɛn ho yiye a, gye sɛ yepue abɔnten fa asukɔtweaa mu kɔ agyananbea. Wubedu hɔ nso na ɛhɔ ayɛ nwininwininwini. Ná yɛn ankasa nni dan, enti yɛsom asafo bi wie a, na yɛkɔ so ara tena baabi a yɛsoɛe no Dwoda kosi Benada anɔpa na yɛafi hɔ akɔ asafo foforo mu.
Ade baako a mepɛ sɛ meka ne sɛ me yere aboa me paa. Ɔmfa n’asɛnka nni agorɔ koraa; da koro koraa nni hɔ a mekae sɛ ɔnkɔ asɛnka ansa na ɔrekɔ. Ɔpɛ anuanom asɛm na odwen nnipa ho. Nokwasɛm ni, eyi aboa me paa.
Afe 1976 mu no, Austria Betel a ɛwɔ Vienna too nsa frɛɛ yɛn sɛ yɛmmra Betel, na wɔma mekɔkaa Baa Boayikuw no ho. Saa bere no na Europa Apuei aman pii abara yɛn adwuma no. Enti na Austria Betel na ɛhwɛ saa aman no adwuma so. Na anuanom a wɔwɔ Betel fa kwan bi so ma yɛn nuanom a wɔwɔ saa aman no so nsa ka nhoma. Onua Jürgen Rundel na na odi anim, na minyaa hokwan ne no yɛɛ adwuma. Akyiri yi me na na mehwɛ sɛ anuanom bɛkyerɛ nhoma ase akɔ Europa aman kasa du mu. Jürgen ne ne yere Gertrude da so ara yɛ akwampaefo titiriw wɔ Germany. Efi 1978 no, Austria Betel tintim nsɛmma nhoma wɔ kasa nsia mu. Afei yɛde nsɛmma nhoma kɔɔ aman ahorow so kɔmaa nnipa a wɔakra bi. Otto Kuglitsch na na odi eyi mu akoten; seesei ɔne ne yere Ingrid yɛ adwuma wɔ Germany Betel.
Mede me ho hyɛɛ asɛnka adwuma no afã biara mu wɔ Austria; ebi ne abɔnten so adansedi
Anuanom a wɔwɔ Europa aman yi so faa kwan bi so tintim nhoma no bi wɔ wɔn ankasa man mu. Nanso ɛnyɛ biribiara na wotumi yɛe; na ɛsɛ sɛ anuanom a wɔwɔ aman foforo so boa wɔn. Yehowa hwɛ maa adwuma no kɔɔ so yiye. Sɛ yɛhwɛ ɔtaa a anuanom faa mu yɛɛ adwuma no ne bere tenten a wɔde yɛɛ saa a, yehu sɛ wɔdɔ Yehowa paa.
ROMANIA NSRAHWƐ TITIRIW BI
Afe 1989 no, minyaa hokwan ne Onua Theodore Jaracz a na ɔka Akwankyerɛ Kuw no ho kɔɔ Romania. Saa bere no na anuanom pii atew wɔn ho afi ahyehyɛde no ho, enti yɛkɔe sɛ yɛrekɔboa wɔn ma wɔasan aba. Efi 1949 na saa anuanom yi twee wɔn ho, na wɔn ankasa tew wɔn asafo. Nanso na wɔda so ara kɔ asɛnka bɔ nkurɔfo asu. Afei na wɔnkɔ sraadi, enti wɔde ebinom koguu afiase sɛnea wɔde anuanom a wɔwɔ ahyehyɛde no mu koguu afiase no ara. Saa bere no nyinaa na Romania aban no nyii ne nsa mfii yɛn adwuma no so, enti yewiaa yɛn ho hyiae wɔ Onua Pamfil Albu fie. Na mpanyimfo baanan ka Onua Pamfil Albu ho, na yɛne mpanyimfo yi ne Romania Ɔman Boayikuw no hyiae. Yɛne Rolf Kellner fi Austria kɔe; ɔno na na ɔkyerɛ nsɛm ase ma yɛn.
Ɛda a ɛto so mmienu a yehyiae no, Onua Albu ka kyerɛɛ mpanyimfo baanan no sɛ wɔnsan mmra ahyehyɛde no mu. Ɔkae sɛ: “Hokwan a yɛanya ara ni; sɛ yɛma ɛpa yɛn ti so a, yɛrennya bio.” Eyi akyi no, anuanom bɛyɛ 5,000 san baa ahyehyɛde no mu. Yehowa dii nkonim na Satan anim guu ase.
Ɛrekɔ 1989 awiei, kyerɛ sɛ ansa na komunis amammu regu wɔ Europa Apuei no, Akwankyerɛ Kuw no too nsa frɛɛ me ne me yere sɛ yɛmmɛyɛ adwuma wɔ yɛn adwumayɛbea ti wɔ New York. Na yɛnhwɛ kwan koraa. Yɛkɔɔ Brooklyn Betel July 1990, na wɔma meboaa Akwankyerɛ Kuw no Ɔsom Boayikuw no 1992 mu. Afei minyaa hokwan kɛse bi July 1994; wɔpaw me kaa Akwankyerɛ Kuw no ho.
MIBU KƆMPƆ HWƐ M’AKYI BƆ KƆNTEN HWƐ M’ANIM
Me ne me yere wɔ Brooklyn, New York
Bere a na mema nkurɔfo aduan wɔ hotɛl no atwam. Seesei meyɛ aduan foforo ho adwuma. Meboa siesie honhom fam aduan de kɔma yɛn nuanom wɔ wiase afanan nyinaa. (Mat. 24:45-47) Sɛ mibu kɔmpɔ hwɛ mfe 50 a mede ayɛ bere nyinaa som adwuma no na mehwɛ sɛnea Yehowa ahyira ahyehyɛde no a, na anigye ahyɛ me koma ma. Sɛ mekɔ amanaman ntam nhyiam a, m’ani gye paa efisɛ yesua yɛn soro Agya Yehowa ho nsɛm kɔ akyiri na yehu Bible mu nokwasɛm pii.
Me mpaebɔ ne sɛ nnipa mpempem pii besua Bible na wɔabegye nokware no na wɔne anuanom a wɔwɔ wiase nyinaa abom asom Yehowa. (1 Pet. 2:17) Mehwɛ kwan sɛ me nsa bɛka me soro akatua na bere bɛso ma Onyankopɔn anyan nnipa asan aba asase so; wobɛhwɛ na me papa a ɔwoo me di mu bi. Migye di sɛ ɔne me maame ne m’abusuafo a aka ani begye ho sɛ wɔbɛsom Yehowa wɔ Paradise.
Mehwɛ kwan sɛ me nsa bɛka me soro akatua na bere bɛso ma Onyankopɔn anyan nnipa asan aba asase so; wobɛhwɛ na me papa a ɔwoo me di mu bi
^ nky. 15 Hwɛ mmea yi asetenam nsɛm wɔ November 1, 1979, Borɔfo Ɔwɛn-Aban mu.
^ nky. 27 Seesei yenni asafo somfo ne ne boafo. Mmom asafo biara wɔ mpanyimfo ntam nkitahodifo ne ɔkyerɛwfo.
ƆWƐN-ABAN—NEA ADESUA NSƐM WOM July 2014